မြန်မာ အာဆမ် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးများ အစည်းဝေး တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ အဖွင့် မ်ိန့်ခွန်းပြော | Danya Wadi
»သတင်းများ»မြန်မာ အာဆမ် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးများ အစည်းဝေး တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ အဖွင့် မ်ိန့်ခွန်းပြော
Posted by danyawadi on November 21, 2017 in သတင်းများ, Link, Movie
မြန်မာ အာဆမ် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများအစည်းဝေးတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ အဖွင့် မ်ိန့်ခွန်းပြော
မြန်မာနိုင်ငံ နေပြည်တော်တွင် ကျင်းပနေသော အာရှ ဥရောပ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ ၅၀ တက်ရောက်သော အာဆမ် အစည်းဝေးကြီးကို ဆက်လက် ကျင်းပနေပါတယ်။
ထိုအစည်းဝေးတွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျ နိုင်ငံမှ အာဆမ် အစည်းဝေးသို့တက်ရောက်လာသော အဆင့်မြင့်အရာ၇ှိ များဖြစ်သည့် တရုတ် ဂျပန် နှင့် အခြား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ အပေါ်သို့ ပိုပြီး အရှိန်မြင့်တက် ဖိအားများရရှိရန် ဆောင်ရွက်ကြောင်း သတင်းများထွက်ပေါ်ခဲ့သည်။
အာဆမ်သို့တက်ရောက်လာမည်ဖြစ်သော ဒေသ အသီးသီးမှ နိုင်ငံခြားရေး အဆင့်မြင့် အရာရှိများကို ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျ မြန်မာ နယ်စပ် ဒုက္ခသည် စခန်းသို့ လွန်ခဲ့သော စနေ နှင့် တနင်္ဂနွေနေ့များတွင် ကနဦး ဖိတ်ခေါ် ပြသခဲ့ပြီး မြန်မာပြည်မှ ထွက်ပြေးလာသော ရိုဟင်ဂျာများကို ပြန်လည်ပြီး လက်ခံဖို့ တိုက်တွန်းသော ဆောင်ရွက်မှုများ အားထုတ် ခဲ့တယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
သို့သော်အစည်းဝေးတွင် အဆိုပါ ကိစ္စများထက် ဒေသတွင်းမှ စွမ်းအင် နှင့် ပို့ဆောင် ဆက်သွယ်ရေး ၊ရာသီဥတု နှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ပျက်စီး ပြောင်းလဲမှု ၊ ဆင်းရဲချမ်းသာကွာဟမှု အကြမ်းဖက်မှု လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စ ပညာရေးနုင့် ရင်းနှီမြုပ်နှံမှုဆိုင်ရာများဘက်ကိုသာ အလေးပေး ဆွေးနွေးမှုများ ပေါ်ထွက်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါ တယ်။
သို့သော် တက်ရောက်လာသော သက်ဆိုင်ရာ သံတမန်တစ်ဦးမှ ကျနော်တို့ ပထမတွင် ရိုဟင်ဂျာ ပြသနာကို အကြီးကျယ် တွန်းတင် မီးမောင်းထိုးဖေါ်ဆောင်ဖို့၇ှိခဲ့ကြောင်း သို့ရာတွင် နောက်ပိုင်းမှသာ ပြောဆို ဖြစ်ကောင်းပြောဆိုဖြစ်ကြမှာ ဖြစ်ပြီး ကွဲလွဲသော နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ ထုတ်ပြန်ချက် တစုံတရာတော့ ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း အဆိုပါ ထုတ်ပြန်ချက်ထဲတွင်လည်း အပြုသဘောဆောင်သော ၀ိုင်းဝန်းပူးပေါင်း အဖြေရှာဖွေသော အပြုသဘောဆောင်သည့် အနေထားမျိုးကို ဦးတည်မှာဖြစ်ကြောင်းနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ကတော့ အဆိုပါ ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ တစုံတရာ ဖေါ်ပြခြင်းမရှိပဲ ငြိမ်သက်နေဆဲဖြစ်ကြောင်းကို UNB သတင်း ဌာနကို ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Ahead of ASEM Foreign Ministers’ Meeting in Myanmar, Bangladesh tried to make the best use of high-level visits fromanumber of countries, including China and Japan in the last two days — Saturday and Sunday — to mount pressure on Myanmar and expedite talks for sending Rohingyas back to their homeland. After visiting Rohingya camps, the Foreign Ministers on Sunday said they will raise the issue at the ASEM FMs meeting. Bangladesh is expecting louder voice from the international community at the meeting. Connectivity across the diverse domains, transport, tourism, climate change, energy security, poverty reduction, people to people contact and cultural cooperation, education, trade and investment cooperation will also be discussed. A diplomat who is in touch with the upcoming ASEM Foreign Ministers’ meeting told UNB that the joint visit to Bangladesh, including Rohingya camps, before their participation in the ASEM FMs’ meeting does put Myanmar on the spotlight for its failure to address the Rohingya issue. “I can assume that the European leaders are very serious about this issue and they would definitely bring additional pressure on Myanmar authorities for Resolution of the issue,” he said wishing to remain unnamed. The diplomat said they might go foraseparate Political Declaration, during the Summit or ask regional players to playamore constructive role in resolving this protracted issue. Suu Kyi remains silent on Rohingya crisis at 13th ASEM Meeting in Myanmar
← ဥရောပ သမဂ္ဂ နိုင်ငံခြားရေးရာ အကြီးအကဲ Federica Mogherini ကို သတင်းထောက်များ မေးမြန်း (Video)
အမေရိကန် သံအမတ်နဲ့ လွှတ်တော် အမတ်တွေ ANP ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံ →